कर्णाली प्रतिष्ठानले फार्मेसी संचालन नगर्दा स्वास्थ्य बिमाबाट ठगिए बिमित !
बिमा कार्डमा तोकिएको अनुसार सेवा नपाएको बिमितको गुनासो
निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश | सामान्य आर्थिक अबस्था भएका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउँने, ५ जना परिवारले वार्षिक २५ सय जम्मा गरेर ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने, प्रतिष्ठानमा भनेकै बेला निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने र अरु भन्दा बिमित व्यक्ति सर्वसुलभ सेवा पाउने यी सबै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका उद्देश्यहरु हुन् ।
यसरी २५ सयले ५० हजारको सेवा पाईन भ्रम त स्थानीयमा फैलियो ।
तर, यर्थातमा जुम्लाका नागरिकले भनेझै सेवा पाएका छन् त ? पातारासी गाउँपालिका ७ की चैती बुढाको अनुभव यस्तो छ–
उनलाई बिमा गराउनु पहिले माथि भनिए झैँ आश्वासन दिइएको थियो । अन्नत चैती बुढा विरामी भएर प्रतिष्ठानमा उचार गराउन आउँदा बिमामा तोकिएझै सेवा पाईनन् ।
सिटामोल हातमा थमाएर कागजभरी औषधीको नाम लेखी मेडिकलबाट किन्न भनेर पठाएको उनको गुनासो छ । ‘स्वास्थ्य विमितले पनि किन्नु पर्छ भनेर सोध्दा बिमा कम्पनीसँग सोध्नु भन्ने जवाफ आयो ।’
उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा गराउँदा सुलभ सेवा पाईएला भनेको त सस्तै औषधी दिएर पठाउने रहेछ, अलि महंगो भयाकी मेडिकल किन्न पठाउने भए किन बिमा गर्नु पर्यो ।’
गाउँमा बिमा दर्ता सहयोगीहरुले भनेझैँ धेरै कुरामा सुविधा पाइने भने पनि आखिर स्वास्थ्य बीमाले बिमितलाई औषधि किन्न पठाउने गरेको बुढाले बताइन् ।
‘बिरामी हुँदा उपचार खर्चमा सहज होला भनेर स्वास्थ्य बीमा गरेको थिए तर स्वास्थ्य बीमाले सस्तो औषधि मात्र दिन्छ, महंगो औषधि मेडिकलबाट नै किन्नुपर्छ’ उनले गुनासो गरिन् ।
पातारासीकै सिता बोहोराले भनिन् ‘२५ सय रुपियाँको बीमावापत ५० हजार सम्मको उपचार पाईने व्यवस्था छ ।’
यता, चन्दननाथ नगरपालिका ५ की जमुना सुनारले आफ्नो १२ जना परिवारको स्वास्थ्य बिमा ६ हजार रुपियाँको गरेकी थिइन् ।
६ हजार रुपियाँको बीमा गरेवापत् १ लाख २० हजार सम्मको उपचार खर्च पाईने भनिएकोमा आफुहरुलाई ठगेको सुनारले गुनोसो गरिन् ।
स्वास्थ्य बीमा गरेवापत् हामी स्वास्थ्य बिमितले पाउनुपर्ने सुविधा दिनुहोस् भन्दा स्वास्थ्य बीमाको कम्पनीमा जानु भने गरेको बिमित सुनारले पनि सुनाइन् ।
स्वास्थ्य बीमाले जुम्लाका सोझा नागरिकलाई सिधै ठगेको भन्दै उनले आक्रोस पोखिन् ।
बिमितहरुले सर्वसुलभ उपचार पाउने, ९ सय २८ प्रकारको औषधि पाउने भनिए पनि सिटामोल बाहेक अरु किन्दा मेडिकल पठाउने गरेको छ ।
बिमा एजेण्टहरूले आफ्नो फाइदाका लागि स्वास्थ्य बीमा गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
बिमित विरामीहरु उपचार गराउँन आउँदा निशुल्क सेवा पाउने भन्दै खुशी हुँदै आएकाहरु पनि पछि महँगो औषधी किनेर फर्किने गरेको पाइएको छ ।
बिमित बिरामीहरुले उपचार गराउँन आउँदा धेरै आशा गर्नु पनि उपयुक्त होईन भन्दै प्रतिष्ठानका मेडिकल डाईरेक्टर मिनराज बुढाले खाद्यन्न समयमै नपाउने कर्णालीमा औषधि कहाँ समयमा नै पुर्याउनु जस्ता कुरा गरेको स्थानीयले बताए ।
जुम्लामा सबै बिमितहरुले गुनासो एउटै छ ।
कतिपय औषधि बीमा कार्ड भित्र पनि नपर्न सक्छ त्यसले गर्दा मेडिकलबाट किन्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई बिमितले स्वास्थ्य सुविधा र उपचार खर्च दिएको डाक्टर बुढाको भनाई छ ।
बिमाभित्र नपर्ने औषधीहरु मात्रै बाहिर पठाउने गरेको उनको दाबी छ ।
स्वास्थ्य विमाका जिल्ला प्रबन्धक पे्रमकुमार भण्डारीकाअनुसार अहिले सम्म जुम्लाका साढे ११ हजार नागरिक बिमित भएका छन् ।
२ हजार १ सय ५३ परिवार सदस्य छन् भने ५४ लाख ६० हजार ४ सय २५ रुपियाँ संकलन भईसकेको छ ।
बिमामा तोकेको बमोजिम औषधी उपचार नपाएको भन्ने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उनले बताए । प्रतिष्ठान सँगै बसेर यस विषयमा निक्र्यौल निकालीने उनको दाबी छ ।
यो समस्या समधानका लागि कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले आफैँ फार्मेसी संचालन गर्न आबश्यक रहेको प्रतिष्ठानका रेक्टर विश्वराज काफल्ले जनाए ।
उनका अनुसार अबको एक महिनामै आफ्नै फारमेसी संचालन हुने छ ।
प्रतिष्ठानमै छैनन् फारर्मेसी
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफ्नै फारर्मेसी नहुँदा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य बिमितको कार्डमा लेखिएको औषधी प्राय मेडिकलमा गएर किन्नु पर्ने कारणनै फारर्मेसी नभएकोले हो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्डमा झण्डै ११ सय १८ प्ररकारका औषधी पाईने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले दिने निशुल्क ७० प्रकार, र आयुर्बेद २५ प्ररकारको औषधी त्यसैमा पर्ने गरेको जुम्ला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संयोजक प्रेम कुमार भण्डारीले बताए ।
तर, प्रतिष्ठानले फार्मेसी संचालन नगर्दा नै समस्या भएको उनको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानका प्रसासकिय अधिकृत द्धन्द्ध बहादुर शाहिले भने ‘फार्मेसी संचालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु लागि परेका छन् ।’
फार्मेसी संचालन भएपछि सबै बिमितहरुका गुनासाहरु पनि नआउने र सबै समस्या समधान हुने शाहीले जनाए ।
फार्मेसी संचालनका लागि बेला–बेला भनेपनि सुनुवाई भएन जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले भने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको ढिला सुस्तीले फार्मेसी संचालनमा ढिलाई भएको उल्लेख गरे ।
फार्मेसीका लागि भवन पनि तयारी अबस्थामा छ ।
तर, आज भोली भन्दै वर्षदिन वित्न लागि सक्दा पनि फार्मेसी संचालन नहुनु सामान्य आर्थिक अबस्था भएकालाई समस्या भएको नागरिक समाजका सदस्य मानदत्त रावलले बताए ।
बिमितहरुले कार्डमा भनेझै औषधी नपाएको भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् ।
तर, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गाउँगाउँमा गएर बिमितको संख्या बृद्धि गर्दैै जानु भन्दा पहिलेकै बिमितहरुलाई उपचारमा जोड दिनुपर्छ, उनले भने ।
प्रतिष्ठान स्रोतले ढिलाको तीन महिनाभित्र आफ्नै फार्मेसी संचालन गर्ने बताएको छ ।
३ सय शैयाको अस्पताल उद्घाटन भएको झण्डै ३ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक उपकरण नहुँदा संचालन हुनसकेको छैन ।